Soo dejisan Windows Live Movie Maker 16.4.3528.0331 – Vessoft
WindowsMultimediaTifaftirayaasha warbaahintaWindows Live Movie Maker
Windows Live Movie Kan sameeyey – software a functional waayo, files multimedia shaqeeya. software The taageertaa, AVI, Wmv, MPEG, MOV, VOB, MP3, WMA iyo qaabab kale oo badan. Windows Live Movie Kan sameeyey waxaa ku jira qalabka loo baahan yahay in la abuuro diiwaanka video tayo sare leh, shows slide iyo bandhigyo. software The kuu ogolaanayaa inaad si ay u isticmaalaan a saameyn badan oo kala duwan, ku dar raacidda muusikada iyo Buur Sheeko. Windows Live Movie Kan sameeyey awood si ay u daabacaan videos ee shabakadaha bulshada caan ah iyo goobaha video qaybsiga.
duubey abuurkii iyo bandhig
Joogitaanka qalab kala duwan
Tiro badan oo audio iyo video saamaynta
Publication ah waxyaabaha abuuray internetka
Soo dejisan Windows Live Movie Maker
Faallo ku saabsan Windows Live Movie Maker
Windows Live Movie Maker Xirfadaha la xiriira